မည်သည့် Android တွင်မဆို Oneplus Weather, Oneplus Weather app | Androidsis
မည်သည့် Android အတွက်မဆို Oneplus ရာသီဥတု [APK]
အရင်ဗီဒီယိုသင်ခန်းစာမှာမင်းတို့မင်းကိုမျှဝေခဲ့ဖူးတယ် မည်သည့် Android 5.0 နှင့်အထက်မဆိုတပ်ဆင်ရမည့် Oneplus ပြခန်း၏နောက်ဆုံးဗားရှင်းအခုတော့ Oneplus ရဲ့ရာသီဥတုခန့်မှန်းချက် app ရဲ့အလှည့်ပါ။ Accuweather အပေါ်အခြေခံပြီး Oneplus မိုးလေဝသနှင့်အလွန်ဆွဲဆောင်မှုရှိသောဒီဇိုင်းနှင့်ဂရပ်ဖစ်စတိုင်နှင့်အတူ.
ထိုအခါငါဘယ်လိုရှင်းပြပါ Oneplus Weathe ကိုဒေါင်းလုပ် ချ၍ တပ်ဆင်ပါဤအပေါ့ပါးသော်လည်းထိရောက်သောရာသီဥတုခန့်မှန်းချက်လျှောက်လွှာသည်ကျွန်ုပ်တို့အားသင့်အားဖိတ်ကြားသည့်အမှတ်တံဆိပ် မှလွဲ၍ အခြား Android terminal ၏အခြားမော်ဒယ်များတွင်ထည့်သွင်းနိုင်သည်ကိုကျွန်ုပ်တို့အားကမ်းလှမ်းသည်။ "ဘယ်တော့မှအခြေမကျနဲ့" ဘယ်တော့မှမနေပါနဲ့
1 Oneplus မိုးလေ ၀ သလျှောက်လွှာကိုထည့်သွင်းရန်လိုအပ်ချက်များ
2 မည်သည့် Android တွင်မဆို Oneplus Weather ကိုထည့်သွင်းရန်လိုအပ်သည့် APKS ကို Download လုပ်ပါ
3 Oneplus ရာသီဥတုလျှောက်လွှာ၏ဗားရှင်းအသစ်ကကျွန်ုပ်တို့အားကမ်းလှမ်းသောတစ်ခု၊ Oneplus Weather
Oneplus မိုးလေ ၀ သလျှောက်လွှာကိုထည့်သွင်းရန်လိုအပ်ချက်များ
Oneplus ဆိပ်ကမ်းများ၏မိုးလေဝသခန့်မှန်းချက်လျှောက်လွှာကိုတပ်ဆင်နိုင်သည့်တစ်ခုတည်းသောလိုအပ်ချက်၊ Oneplus ရာသီဥတု၎င်း၏ Android 5.0 Lollipop (သို့) ပိုမိုမြင့်မားသော Android version ဗားရှင်းတွင်ရှိပါ.
အလားတူစွာကျွန်ုပ်တို့သည် menu မှသာဖွင့်ရန်လိုအပ်လိမ့်မည် ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Android ၏ settings ကို, အပိုင်းအတွင်းပေါ်လာသော option ကို လုံခွုံရေး, ထိုနာမကိုအမှီအောက်မှာ option ကို အမည်မသိဇာစ်မြစ်သို့မဟုတ်မသိသောရင်းမြစ်များ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့အား APK format သို့မဟုတ်ပြင်ပတွင်ဒေါင်းလုပ်လုပ်ထားသော applications များအတွက် Android application အတွက်တရားဝင် application store သို့ install လုပ်ခွင့်ပြုသည်။
ပြီးတာနဲ့ဒါပြီးပြီ ကျနော်တို့နှစ်ခုလိုအပ်သော apk ကို download လုပ်ပါ, အောက်တွင်ဖော်ပြထားသော apks များနှင့် download လမ်းကြောင်းသို့သွားရန်၎င်းတို့ကိုနှိပ်ခြင်းဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့ထည့်သွင်းသည်။
မည်သည့် Android တွင်မဆို Oneplus Weather ကိုထည့်သွင်းရန်လိုအပ်သည့် APKS ကို Download လုပ်ပါ
ဤ link မှသင့်အားတရားဝင် XDA ဖိုရမ်သို့ဝင်ရောက်လိမ့်မည် မည်သည့် Android terminal ကိုမဆို Oneplus Weather ကိုထည့်သွင်းရန်လိုအပ်သည့် apk နှစ်ခုကိုသင်ဘယ်မှာရှာရမည်နည်း။
အကယ်၍ သင်သည် Telegram ရှိ Androidsis အသိုင်းအဝိုင်းတွင်ပါဝင်လျှင်၊ Aရာဝတီ, ရပ်ရွာကိုယ်နှိုက်၌သင်တွေ့လိမ့်မည် application နှစ်ခုလုံးကို Telegram မှမထွက်ပဲတိုက်ရိုက်ချိတ်ဆက်ရန်.
Telegram ရှိ Androidsis အသိုင်းအဝိုင်းမှ Oneplus Weather ကို Download လုပ်ပါ.
တရားဝင် XDA forto မှကူးယူပါ.
Oneplus ရာသီဥတုလျှောက်လွှာ၏ဗားရှင်းအသစ်ကကျွန်ုပ်တို့အားကမ်းလှမ်းသောတစ်ခု၊ Oneplus Weather
The Oneplus ရာသီဥတုခန့်မှန်းချက် app, Oneplus ရာသီဥတု, ဒါဟာပေါ့ပါးပြီးအလုပ်လုပ်တဲ့ပင်လယ် application ဖြစ်ပါတယ်ဆိုလိုသည်မှာ၎င်းသည်ရိုးရှင်းပြီးပျော့ပျောင်းသော application တစ်ခုမဟုတ်ဟုဆိုလိုခြင်းမဟုတ်ပါ သင်ကြိုက်နှစ်သက်သောဂရပ်ဖစ်များနှင့်ကာတွန်းကားများဖြင့်အံ့မခန်းဖွယ်ကောင်းသောလျှောက်လွှာ.
apk နှစ်ခုစလုံးတပ်ဆင်ခြင်းဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ကိုယ်ပိုင်နှစ်ခုလုံးရှိလိမ့်မည် ကိုယ်ပိုင်မိုးလေဝသခန့်မှန်းချက် Desktop Widget အဖြစ်မိုးလေဝသခန့်မှန်းချက်အက်ပ် ဘယ်နေရာမှာအရမ်းသိမ်မွေ့ပြီးကြော့ရှင်းတဲ့နည်းနဲ့ငါတို့ရဲ့လက်ရှိတည်နေရာမှာလက်ရှိအပူချိန်၊ နေ့စွဲနဲ့ရာသီဥတုကိုပြတယ်။
လျှောက်လွှာ Oneplus ရာသီဥတုခန့်မှန်းချက် ၎င်းသည်လက်ရှိတည်နေရာအပြင် application interface ၏ထိပ်ရှိအဆောက်အအုံပုံစံခလုတ်ကိုနှိပ်ခြင်းဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့ထည့်လိုသောမြို့များစွာကိုပြသသည်။ ထိုနည်းတူစွာကျွန်ုပ်တို့ကြိုက်နှစ်သက်သောမြို့များကိုထည့်သွင်းသောနေရာမှတည်ရှိနေသောမြို့ကို ထား၍ တစ်ဖက်သို့လျှောခြင်းဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်ရွေးချယ်ထားသောမြို့အားလျှောက်လွှာရှိမြို့များစာရင်းမှဖယ်ရှားပစ်တော့မည်။
လက်ရှိအပူချိန်၊ ရွေးချယ်ထားသောမြို့များ၏အမြင့်ဆုံးနှင့်အနိမ့်ဆုံးအပူချိန်နှင့်ပတ်သက်သောသတင်းအချက်အလက်များကိုအထက်သို့ပွတ်ဆွဲရုံဖြင့်တိုက်ရိုက်အချက်အလက်များအပြင်လျှောက်လွှာသည်ကျွန်ုပ်တို့အားပြလိမ့်မည် လာမည့် ၆ ရက်အတွက်မိုးလေဝသခန့်မှန်းချက်အပြင်ရွေးချယ်ထားသည့်မြို့၏အမြင့်ဆုံးနှင့်အနိမ့်ဆုံးအပူချိန်ခန့်မှန်းချက်.
အကယ်၍ သင်သည်လျှောက်လွှာကိုလည်ပတ်နေပြီး၎င်းနှင့်တပ်ဆင်ခြင်းနှင့်ပါ ၀ င်သည့်အသေးစိတ်အချက်အလက်အားလုံးကိုသိလိုပါကဤဆောင်းပါး၏အစတွင်သင့်အားထားခဲ့သည့်ဗွီဒီယိုကိုကြည့်ရှုရန်သင့်အားအကြံပေးသည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » Android application များ » APK » မည်သည့် Android အတွက်မဆို Oneplus ရာသီဥတု [APK]
Blackview P10000 Pro: ၁၈: ၉ မျက်နှာပြင်နှင့် ၁၁၀၀၀ mAh ဘက်ထရီ